Edela akwụkwọ ikpe ọnwụ na-ezighi ezi ugbu a maka Ọdachi Egwu Astroworld
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Edela akwụkwọ ikpe ọnwụ na-ezighi ezi ugbu a maka Ọdachi Egwu Astroworld
Ndị ọka iwu Texas Steve Hastings na Henry Blackmon nke Hastings Law Firm gbara akwụkwọ na Mọnde megide rapper Travis Scott, Cactus Jack Records, Scoremore, na ndị ọrụ a na-ekwu na NRG Park n'ihe metụtara ọdachi ndị dị na ememme egwu Astroworld nke hapụrụ mmadụ asatọ nwụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ nke ukwuu.
A na-agba akwụkwọ ikpe ahụ n'aha Maria Pena na Harris County, Texas. Mgbe ihe omume abalị Fraịde gasịrị, nwa ya nwoke dị afọ 23, Rudy Pena nwụnahụrụ ya.
Okwu ikpe ahụ na-ekwu na n'isi mmalite nke mmemme ahụ, ndị na-egwu egwu egwu mebiri ihe mgbochi iji banye ebe a na-eme egwuregwu na mgbe e mesịrị ìgwè mmadụ gbabara ogbo ebe Travis Scott na-eme ihe. Ebubo a na-egosi n'ihu ọha mmadụ hapụrụ ndị bịaranụ na-ekuru ikuku na ụfọdụ na-efunahụ onwe ha. N'agbanyeghị ihe omume ndị a na-eme na mgbe ụgbọ ala mberede gbalịrị iru ndị nọ n'ahụhụ, ihe ngosi ahụ gara n'ihu.
Ikpe ahụ na-ekwupụta ọtụtụ okwu bụ nleghara anya na nnukwu nleghara anya nke ndị na-agbachitere ma na-achọ ihe karịrị $1,000,000.00 na mmebi.